Nagu saabsan - NanJing Uruurinta Ganacsi Uruurinta weyn ee Co., Ltd.
Ihome wuxuu ujeedkiisu yahay inuu soo bandhigo muuqaal summad ah oo dareen iyo dabeecad u leh xayawaanka leh farsamo tayo sare leh, agab bey'adeed u habboon, iyo ikhtiraac farsamo. Annagu ma nihin kaliya naqshadeeyayaasha, laakiin sidoo kale jecel eeyga jecel. In kasta oo lagu qanco xayawaannada raaxada leh, waxay sidoo kale buuxisaa shuruudaha sharraxaadda ee eeyaha jecel, gaar ahaan in lala kulmo qaabka daryeelka xayawaanka fudud, fudud, sayniska iyo farsamada casriga ah.
Shaqada gudaha ee shirkaddu way cadahay, waxayna leedahay waaxda qaabeynta qaabdhismeedka si ay u xaqiijiso cusbooneysiinta iyo soo noqoshada alaabada xayawaanka; waaxda farsamada oo awood u leh inay ka gudubto xadka, dhiseyso qaab-dhismeed xogeed aad u ballaaran, ku soco dhinaca hore ee isbeddelada dalabka, fahamka baahiyaha macaamiisha; waaxda wax soo iibsiga xirfadeed iyo waaxda suuqgeynta si ay kuu siiso talo bixin xirfadeed iyo adeegyo wax soo iibsi. Waxa kale oo jira shaqaale u adeega macaamiisha oo leh tayo wanaagsan oo awood u leh inay si feejigan kuugu adeegaan. Kadib tababar farsamo xirfadeed, waxaan nahay lammaanahaaga aad ku kalsoon tahay.
Shirkaddu waxay leedahay derajooyin heerar adag oo kormeer ah, laga soo bilaabo alaabta ceyriinka ah illaa alaabooyinka dhammaaday, iyadoo fiiro gaar ah u leh geeddi-socod kasta oo loogu talagalay dhalashada alaabada xayawaanka. Faahfaahin kastaa waa taxaddar, si adag oo waafaqsan heerarka caalamiga ah ee soo ogaanshaha iyo falanqaynta.
Kooxdayada R&D guud ahaan waxay haystaan ​​shahaadada mastarka ee sayniska xoolaha, iyagoo u heellan horumarinta iyo naqshadeynta alaabada saaxiibtinimada leh ee waxtarka u leh caafimaadka jirka iyo maskaxda xayawaanka shantii sano ee la soo dhaafay.
Wang Haifeng, oo ah aasaasaha shirkadda, waxaa ka go'an inuu u ololeeyo dadka deegaanka iyo shirkadaha daryeela inay ka qaybqaataan aasaasida xarumo baadi goob ah oo dadka laga uruuriyo: dadka deegaanka waxay siiyaan hoy eyda baadi ah, warshaddu waxay siisaa cunto bilaash ah iyo alaabo ay caruurtu ku ciyaaraan si warshadda iyo bulshada ayaa wada shaqeyneysa si ay ugu dhisaan guri qurux badan eeyaha baadi ah!
Ku hagaajinta qaabka beeraha xayawaanka leh
ikhtiraaca sayniska iyo farsamada.
Daryeelka Xayawaanka 'Caafimaadka Jirka iyo Maskaxda
Diido quudinta hal hab oo edeb daran isla markaana fiiro gaar ah u leh caafimaadka jirka iyo maskaxda ee xayawaanka rabaayadda ah. Sayniska naqshadeynta bini-aadamka wuxuu daryeelaa xayawaanka guriga wuxuuna u abuuraa guri diiran oo qurxoon xayawaanka.
Fikradda ah in xayawaanka loo qaato qoys ahaan,
daryeelidooda iyo ilaalinteeda, ilaalinta
ruuxda sinnaanta iyo saaxiibtinimada.
Habka iskaashiga caalamiga ah
Qiimeyn wada shaqeyn wanaagsan